Nyocha CBN's E-Naira Project [ICT Clinic]
Mbido Media Tlọ ọgwụ ICT (Akwụkwọ akụkọ Punch)
Inyocha ọrụ e-Naira nke CBN [ICT Clinic]
Central Bank of Nigeria anọwo na akụkọ mgbe niile, mmetụta ya na -akawanye njọ - site na mkpebi ya ịkwụsị akaụntụ nke ụfọdụ mmalite n'aha ịkwụsị ịkọ nkọ na ichebe naira, ruo mkpebi ịkwụsị ikenye USD na BDC. ndị na -arụ ọrụ, mana na amamihe ya na -enye ohere ka mba dị mgbagwoju anya dị ka Naịjirịa nwee ọtụtụ ọnụego mgbanwe.
Ihe niile aghọọla nnukwu circus. Abụghị m onye ọchụnta akụ na ụba mana amaara m otu ihe doro anya, na -enye ohere ka ọtụtụ ọnụego mgbanwe hapụ ohere maka wayo; ọ bụghị ndị mmụọ ozi na -elekọta ụlọ akụ ndị ahụ.
Agbanyeghị, ihe m na-elekwasị anya taa bụ ọrụ e-Naira nke CBN.
Ọdịbendị teknụzụ na-atụ anya Ọktoba 1st mgbe 'CBN' anyị niile maara ihe ga-ewepụta ihe ọ kwenyere na ọ ga-elele ịrị elu nke pundits crypto na mba ahụ.
Nyochaa mmekọrịta n'etiti teknụzụ na usoro ntuli aka [ICT Clinic]
Teknụzụ na -eji ihe ịma aka enweghị ntụkwasị obi nke Nigeria eme ihe [ICT Clinic]
Nhọrọ CBN enweghị mmasị maka aha ngalaba eNaira.com [Ụlọ ọgwụ ICT]
Iyi egwu mmachi na -adịghị mkpa site na CPN [ICT Clinic]
Ekwesịrị m ịsị na echiche nke CBN na -abata iji bido ngwa ngwa Central Bank Digital nke ya n'ihu ọtụtụ ụlọ akụ etiti ụwa bụ ihe na -atụ egwu ma tookwa.
Agbanyeghị, m na -eche ma echebara nke a echiche nke ọma ma ọ bụ naanị iwu emebere ma kwupụta na ọsọ ọsọ naanị n'ihi iyi egwu nke cryptocurrencies.
N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ akụ etiti gafee ụwa yiri ka ha ewerela pedal dị nro na 'mkpọsa' ha megide ego ndị na-adịghị. Echiche bụ: "Ọ bụrụ na anyị enweghị ike imeri ha, anyị ga -esonyere ha."
Agbanyeghị, na nke a, ụlọ akụ etiti anaghị aga maka cryptocurrencies kama Central Bank Digital Currencies. Ka cryptocurrencies na-eyi ụlọ ọrụ ego ọdịnala egwu dị ka ụlọ akụ etiti si dị, gọọmentị nke ha kwesịrị ịmepụta ụzọ yiri ibe ya maka ojiji cryptocurrency.
Na agbanyeghị echiche m, e-Naira nwere ike bụrụ eziokwu n'izu ole na ole sochirinụ. Agbanyeghị na usoro ka ego a ga -esi arụ ọrụ apụtachaghị nke ọma n'oge a n'ihi na ana m eche ma CBN enyochala nke ọma gbasara ihe akụrụngwa blockchain ọ na -ezube idobe yana ka aga -esi ekwe nkwa nzuzo.
Dabere na Rukayat Mohammed, onye isi teknụzụ teknụzụ na CBN, ụlọ akụ kacha elu na -enyocha ohere nke CBDC ihe karịrị afọ abụọ.
N'ịga n'ihu, ọ sịrị, "Pasent iri asatọ nke ụlọ akụ etiti etiti ụwa na -enyocha cryptocurrency na enweghị ike ịhapụ Nigeria na nha."
CBN gara n'ihu kpọọ Fraịde, Ọktoba 1, 2021, dị ka ụbọchị mmalite ya maka e-Naira ma werekwa nzọụkwụ ọzọ site na ịhọrọ ụlọ ọrụ fintech nke dabeere na Barbados, Bitt Inc.
N'ime ihe ndị a niile, enwere ajụjụ gbasara nhọrọ CBN nke Bitt Inc. dị ka onye ọrụ nka. Agbanyeghị, ilebakwu anya na InterStellar, ụlọ ọrụ nke bịara n'ọkwa nke abụọ na -egosi na ọ ghọtara Africa nke ọma na nke kachasị mkpa, bụ nzukọ n'azụ Bantu, akụrụngwa ngọngọ ọha, nke bụ ụdị mbụ na kọntinent ahụ.
Nhọrọ Bitt bịara obere oge ka CBN wepụtara akwụkwọ ntuziaka maka e-Naira, wee gbada n'ahịrị, onye isi ụlọ akụ apex nke nkwukọrịta, Osita Nwanisobi, ekwuola ihe kpatara ụlọ ọrụ fintech nke dị na Barbados ji bụrụ nhọrọ. Dị ka ya si kwuo, Bitt 'na -anwale ma gosipụta ahụmịhe ego dijitalụ'.
N'ime ihe yiri ka ọ na-akwado nkwupụta Nwanisobi, webụsaịtị ụlọ ọrụ fintech nke dị na Barbados na-atụ aro na ụlọ ọrụ ahụ emeela ụdị ọrụ CDBC maka Central Caribbean Central Bank na ọ gara nke ọma ka ECCB wepụtara ego dijitalụ ya, Dcash.
Ntugharị a nke CBN ka bụ nzọụkwụ ọzọ mba na -eme iji wezuga azịza ụmụ amaala ma ọ bụ nke Afrịka. Ọ bụrụ na Naịjirịa dịka obodo na -aga n'ihu na -eme mkpọsa maka ịkọwapụta teknụzụ ya site na ụlọ ọrụ gọọmentị dị iche iche, gịnị kpatara ụlọ akụ kacha elu jiri mee ihe a nke na -etinye Nigeria n'ogige ọzọ?
Naịjirịa dịka obodo juputara na nka na ikike ịrụ ọrụ iji zụlite CBDC ya. Agbanyeghị, ịga n'ihu na -amachibido teknụzụ obodo dị na mba ahụ na -achọ nchegbu.
Akụkọ na -egosikwa na nkwekọrịta n'etiti Bitt na CBN nwere ike dapụrụ n'ụkpụrụ ụfọdụ dịka iwu siri chọọ. Nkwekọrịta a bịanyere aka n'etiti CBN na ụlọ ọrụ fintech nke dị na Barbados ga-enwerịrị irube isi na usoro ịzụ ahịa IT.
Mmemme dị ka nke a, dị ka akụkọ si kwuo, chọrọ ozi gọọmentị ọ bụla, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngalaba ọ bụla ga -achọ nzere site na National Information Technology Development Agency tupu ịmalite dị ka ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ịbụ ụlọ mkpocha maka ịzụrụ IT nke Nigeria.
Nke a dabere na ngalaba 6 nke iwu NITDA, 2007. Ọ bụrụ na akụkọ a bụ ihe ọ bụla ị ga-agabiga, mgbe ahụ ọ bụ ihe na-egosi na CBN bụ ụlọ ọrụ na-anaghị erube isi n'iwu.
Nnyocha elegharị anya na mbugharị CBN
Nkwuputa CBN bidoro na Mọnde, Ọgọst 30, 2021, mgbe ọ dabere na nhọrọ Bitt na arụmọrụ, ikike, nchekwa, mmekọrịta na ahụmịhe mmejuputa iwu. Enwere enweghị nkwekọrịta nke nwere ike ibute ọrụ ahụ ihe egwu.
Onu ogugu onu ogugu nke Eastern Caribbean Currency Union bu mmadu 634,393, onu ogugu adighi na steeti obula na Nigeria. Yabụ ajụjụ a bụ, kedu ka ọnụ ọgụgụ ahụ e kwuru n'elu nwere ike isi jikọta ya na ahụmịhe mmejuputa?
Ebe ọ bụla gafee ụwa, ọbịbịa nke ego dijitalụ dị ka nwa ọhụrụ nọ na ngọngọ. Yabụ, enweghị teknụzụ dabara adaba nke gosipụtara ahụmịhe ogologo oge n'okwu a.
Ikwenye ka ụlọ ọrụ fintech nke ime obodo mejuputa oru a agaghị abụ maka uto kamakwa mmepe maka oke obodo a gara.
Ọ bụ na etinyeghị Remita maka Akaụntụ Otu Akụ? Ọ bụ na ọ bụghị akụkọ ihe ịga nke ọma? N'ụzọ doro anya, o nweela. Gọọmentị Naịjirịa tụkwasịrị obi na azịza nke ụmụ amaala a ga -enyere aka ịkwụsị mmefu ego na oke, ọ nwere.
Yabụ kedu ihe CBN enweghị ike inye ha otu ụzọ ahụ n'ihe gbasara e-Naira? Site na ịrị elu fintech na -aga n'ihu na Naịjirịa na ihe ịga nke ọma edere na kọntinent na karịa, gọọmentị nke ụbọchị ahụ kwesịrị itinye uche na mmepe obodo niile, ma ọha mmadụ ma mmadụ.